ကလေးများနှင့် လူကြီးများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ ( The Senses ) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကလေးများနှင့် လူကြီးများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ ( The Senses )
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Saturday, April 02, 2016 SayarMichaellinlin No comments
A. Something smells good. What are you doing?
- မွှေးနေတာပဲ . ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ ။
B. I'm baking cookies.
ငါ ကွတ်ကီး ဖုတ်နေတာ။ ( ဘီစကွတ် )
A. Are they done?
အိုး .. နိုး...
B. I don't know . They don't look good.
မသိပါဘူး ..မုန့်တွေက လှလည်း မလှဘူး ( ကြည့်မကောင်းဘူး )
A. They smell good. I'll try one.
အနံလေးကတော့ မွှေးလို့ .. ငါ တစ်ခု မြည်းကြည့်မယ်.
A. It tastes great!
Look/ - Look /
Listen/ - sound/
Smell/ - smell/
Touch/ - feel/
Taste/- taste /
1. Look at the butterfly.
3. Smell the flower.
4.Touch the rabbit.
5. Taste the candy.
၁။ရူပါရုံ ...Sight .
.နဲ့ပါတ်သတ်တာကို အင်္ဂလိပ်လို လွယ်လွယ်လေးတွေးနဲ့ ပြောကျင့်ရအောင်။
It looks beautiful. ဒီနေ့ရာမှာ Look ကိုဘာသာပြန် မနေပဲ is အနေနဲ့သာ ဆိုကြည့်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ It is beautiful. လိပ်ပြာလေးက လှလိုက်တာပဲပေါ့။ Verb of incomplete Predication လို့ခေါ်တယ်။ Linking Verb လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။... Adjective အဓိပ္ပါယ်..သော ကနေ .....တယ်၊ ......သည် ဖြစ်သွားတယ်။
1. Look at the sunset.
မိုးရွာပြီးစ ..ကောင်းကင်ကြီးမှာ သက်တန့်ကြီးကို ကလေးဘ၀က ပျော်ရွင်စွာ အသံနဲ့.
2.look at the rainbow.
လှလိုက်တာ ( မယုံကြည်ဖွယ် ၊ အံသြဖွယ်ကောင်းအောင်လှသည် )
အရုပ်ဆိုးဆိုး မျက်နှာဖုံးကြီးတစ်ခု ဆိုပါစို့.
3.Look at the mask.
ညအချိန် စလိုက်မီးတွေ အပြည့်နဲ့ ရွှေရောင်တွေလင်းဖြာနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ပြည်သူ့ဥယျာဉ်အရှေ့ကပဲ
jဖတ်ဖြတ်၊ ဘယ်နားက ကြည့်ကြည့် ပြောဖြစ်မဲ့ စကားလေးပါ။ (အခုတော့ လူတွေက သူတို့ပဲ အပိုင် ဖူးမျှော်ဖို့ အထပ်မြင့်ကြီးတွေနဲ့ ကွယ်ချင်နေပြီ )
4.Look at the Shwedagon.
It looks magnificent !
ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးဘေးမှာ ကြယ်တွေကြည့်ပြီး ဂီတာတဲ့ ညတွေ၊ စစ်ကိုင်း ပုထိုးတော်ကြီးပေါ်က မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ၊ကိုတွေးကြည့်ပြီ...
5. Look at the Irrawaddy
It looks breathtaking !
ဈေးသွားရတဲ့ သူတွေ သုံးရမဲ့ စကားလုံးလေး။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ပုံပေါ်တယ်၊ ဟန်ရှိတယ်.. အသွင်ရှိတယ်.. လက္ခဏာရှိတယ် စသည့်ဖြင့် သင့်သလို ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာမပြန်ပဲ လေ့ကျင့်ရင် ပိုပြီး အပြောမြန်နိုင်မယ်ယူဆပါတယ်။
6. That fish looks rotten. ငါးတွေက လတ်ပုံမရဘူး။ ( Rotten =decayed )
7. You looks happy.
8. They don't' look good.
9.How does the butterfly look?
လိပ်ပြာလေးက ဘယ်လိုလဲ ( ဘယ်လိုပုံလဲ )
10. How does the the rose look?
11. How does the Shwedagon look?
12. How does the Irrawaddy look?
ကျန်တဲ့ ...အာရုံတွေ .. တခုပြီးတစ်ခု ရေးသွားပါမယ်.. အော်ဖတ်ကြည့်ပါ.
ငယ်စဉ်က ဂီတာသံကြားရင် နားစွင့်တတ်သည့် အကျင့်ရှိခဲ့သည်။
ယခုလည်း ဂီတသံ၊ ဂီတာသံကောင်းကောင်းဆိုလျှင် နားစွင့်တတ်ဆဲ။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးခါစ မူဆယ်မြို့တွင် ဦးလေးများနှင့် ခဏသွားနေခဲ့သည်။ တစ်ညမှာ အိမ်းနီးနားက ဆောက်လက်စ သုံးထပ်တိုက်ပေါ်မှ ဂီတာတီးသံကို ကြားရသည် ။သူဆိုတဲ့ သီချင်းက လေးဖြူရဲ့ မျော်လင့်ခြင်းလေး ဆိုသော သီချင်း။ သူ့သီချင်သံမှာ နှစ်မျောသွားပြီး သီချင်းပြီးတော့ ပါစပ်မှလည်း ကောင်းလိုက်တာကွာ ဟု..ပြောမိသည်။
It sounds wonderful! ပေါ့..ဒီနေရာမှာလည်း soundကို ဘာသာမပြန်ပါနဲ့။
sound ကိုတခြားနေရာမှာ look အဓိပ္ပါယ်နဲ့ အတူသုံးတတ်သလို ၊ တခြား အဓိပ္ပါယ်လည်းရှိ ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အကြားအာရုံနဲ့ ပါတ်သက်တာပဲ လေ့လာပါမယ်။
( ကောင်းလိုက်တာ )
၂။ ငှက်ကလေးက သီချင်းဆိုနေတယ် ဆိုပါစို့..ငှက်ကလေး သီချင်းဆိုတာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါအုံး..
Listen to the bird singing.
၃။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒန်အိုးကို ခေါက်နေတယ်။ နားထောင်လို့ ကောင်းမယ်ထင်သလား ဘယ်ကောင်းမလည်းနော်..
Listen! Do you hear that noise ?
Yes, I do. The noise sounds awful.
(ဆိုးလိုက်တဲ့ အသံ )
၄. R ဇာနည်က သီချင်းဆိုနေတယ် ၊ ဆိုကြပါစိုရယ်....ကိုယ်ကလည်း ကြားတယ်။အဲ့ဒီမှာ......
I hear music. He is singing.
၅. အရမ်းအသံထွက်ကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက် အဂ်လိပ်လိုပြောနေတယ်ပဲထားပါတော့။
I hear English. Somebody's speaking.
It sounds interesting. It sounds beautiful
သူပြောနေတာ စိတ်ဝင် စားစရာကောင်းလိုက် .. သူပြောတာ သိပ် ကောင်းတာပါပဲ။
လိပ်ပြာလေးက လှတယ်။ စသည့် အာရုံတွေထဲကနေ..
၃။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ ( touch)
လို့ ခေါ်တဲ့ အထိအတွေ့ကို သိသောခံစားချက်ကို Feel နဲ့သုံးပါတယ်။
မင်းရဲ့ လက်ဖ၀ါးလေးကို ထိတွေ့တော့ ကိုယ်နူးညံ့မှုကိုခံစားရတယ်ပေါ့။
ဒါပေသိ...အပြင်လောကမှတော့ ..မင်းလက်လေးက နူးညံ့လိုက်တာ လိုပဲ ပြောကြတာများပါတယ်။ ခေါင်းအုံးကို ထိကြည့် ...အိနေတာပဲ ။
ကျောက်တုံးကြီကို ထိကြည့် မာတောင်နေတာပဲ။
မှန်ကလည်း ချောနေတာပဲ။ သစ်ပင်ကြီးက ကြမ်းလိုက်တာ..
မင်းလက်ကြီးက ကြမ်းလိုက်တာ..နင့်အသားလေးက နုညံ့နေတာပဲ..လို့အထိအတွေ့ အာရုံကို ပြောချင်ရင် ဒီစာလွယ်လွယ်လေးကို ကျင့်လိုက်ပါ။
1.Touch the pillow.
2.Touch the rock.
3.Touch the mirror.
4.Touch the tree.
5.Touch the rabbit.
ခေါင်းအုံးက ဘယ်လိုခံစားလည်းလို့ မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။
"ခေါင်းအုံးလေးက ဘယ်လိုလဲ "" နူးညံ့တယ်" ဆိုရင် ရပါပြီ။
How does the rock feel?
The rock feels hard.
How does the mirror feel?
The mirror feels smooth.
The tree feels rough?.
Does the the pillow feel rough or soft?
ခေါင်းအုံးက နူးညံ့လား ကြမ်းလား
It feels soft. နူးညံတာပေါ့.
Does the mirror feel rough or smooth ?
မှန်က ချောမွေ့လား ကြမ်းလား
Does her cheek feel soft or nice?
When I touch my little girl's hair , it feels velvety.
Feel က စိတ်ခံစားချက်မှာလည်း သုံးပါတယ်။ဒီမှာတော့ အထိအတွေ့ သက်သက်ကိုသာရေးထားပါတယ်။
၄။ ရသာရုံ .(Taste )
This ice cream tastes nutty.
This medicine tastes bitter. ဒီဆေးကြီးက ခါးလိုက်တာ..
(ဒီဆေးက ခါးတဲ့ အရသာရှိတယ် ) ဒါမျိုးက အရပ်ထဲမှာ ပြောခဲပါတယ်။
Your curry tasted salty.
မင်းရဲ့ဟင်းက ငန်တယ်။ ( ငန်ခဲ့တယ် )( အတိတ်ကာလ)
(တစ်ခုသတိပေးချင်ပါတယ်။ Delicious .က Non-gradable adjective ဖြစ်လို့ very တို့ extremely စတဲ့ adverb of degree တွေနဲ့တွဲမသုံးပါဘူး။ very delicious လို့ ကြားကြားနေလို့ စကားချပ်ရေးလိုက်တာပါ။ Ice berry ကမုန့်ပုံးလေးတွေမှာ simply delicious လို့ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ )
1. Taste these cookies.
They taste good. They are delicious!
2.Taste the strawberry.
3.Try this honey.
4. Taste the lemon.
5. Taste potato chip
6. Taste the dark chocolate
မေးခွန်းလေ့ကျင့်ရအောင်၊ အလွန်လွယ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်တာ ထက်မပိုရင် ၊သူကလည်း သင့်ဆီမှာ မနေခဲ့သလို၊ သုံးခါနီးရင် ပါစပ်က ထွက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
How does the strawberry taste ?
စတော်ဘယ်ရီ အရသာဘယ်လိုလဲ... (ကိုယ်သိတဲ့ ၊ ၀ယ်ထားတဲ့ စတော်ဘယ်ရီကို မေးတဲ့သဘောပါ ) စတော်ဘယ်ရီတွေဟာ ဘယ်လို အရသာ ရှိသလည်း မေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။
How does this win taste? ( ဒီဝိုင် အရသာ ဘယ်လိုလဲ )
It tastes delicious!.ရှယ်ပဲ ...
How do these apple taste?
ဒီပန်းသီးတွေ ဘယ်လို့လဲ ( ဘယ်လို အရသာရှိသလဲ )
မိမိကြိုက်ရာ အစားထိုးပါ ၊ ပြောကြည့်ပါ။
It tastes nasty . ( မနှစ်မြို့ဖွယ် )
It tastes pleasant.
It tastes unpleasant.
They taste rancid. (ဆီချေးစော်နံ )
It tastes vile. ( မသတီစရာ ၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား )
They taste strong. (ပြင်း၊ ... ကျကျ )
fresh (လတ်ဆတ်သော )
pungent (အနံစူးရှသော ) ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ရှိသော
sickly (မနှစ်သက်ဖွယ် ၊ အန်ချင်စရာ )
The cake hadasickly taste.
It tasted sickly.
cloying ( too sweet )
...၁။ ဒီကိတ်က..ဘယ်လိုအရသာကြီးလည်း မသိဘူး။
၂။ ဒီရေခဲ့မုန့်လေးက ဆိမ့်နေတာပဲ။
၃။ ဒီ လိမ္မော်သီးတွေက ချဉ်လိုက်တာ။
၄။ ဒီချိုချဉ်အရသာက ထူးဆန်းတယ် ။ ( ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တာ )
၅။ မုန့်တွေက ဆီချေးစော်နှံလိုက်တာ ဆိုရင် ပြောတတ်လောက်ပါပြီး။
တစ်ခုတော့ ကျန်သေးတယ်.. နောက်မှ ရေးမယ်။ လေ့ကျင့်ပါ ။ ကလေးများအားလည်း သင်ပေးပါ။